Windows 7Logon Background Changer...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Windows 7Logon Background Changer လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!အရင်လည်းတင်ပေးပြီးသားလေးပါ...! သိပြီးသား သူငယ်ချင်းတွေ ရှိသလို မသိလိုက်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ...! တက်လို့တော မဟုတ်ပါဘူး မျှဝေတဲ့သဘေားပါ...! စိတ်ဝင်စားရားတော့ အားလုံးယူသွားပါ Download လုပ်ပြီးရင် အင်စတေားလေးတော့ လုပ်ပေးလိုက်ပါ တက်လာတဲ့ Icon ထဲမှာ ၀င်ပြီး ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ ပုံးလေးကိုပြောင်းလိုက်ပါ......! သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Computer လေးဟာ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကိုမြင်လိုတဲ့ ပုံလေးကို မြင်ရမှာပါ...! စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ Mediafire လေးဖြင့် အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 883.94 KB )
No Response to "Windows 7Logon Background Changer...!"